क्यान्सर अस्पतालमा २९ करोडका नयाँ उपकरण जडान – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
क्यान्सर अस्पतालमा २९ करोडका नयाँ उपकरण जडान
२०७५ भाद्र १६, शनिबार ०९:४७ गते
भरतपुर । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा २९ करोड मूल्यका नयाँ र अत्याधुनिक क्यान्सर उपचार उपकरण जडान गरिएको छ ।
लिन्याक मेसिन (१८ करोड), रेडिएसनपूर्व रोगग्रस्त ठाउँको प्लानिङ गर्ने सिटी स्क्यान विथ सिमुलेटर मेसिन (८ करोड) र शरीरको भित्री अंगमा क्यान्सर भएको छ भने सो स्थानमा रेडिएसन दिने महत्वपूर्ण ब्राकोथेरापी मेसिन (३ करोड) को सेवा सुरू गरेको छ ।
अस्पताललाई तत्कालै एउटा हेल्सियन लिन्याक र टोमोथेरापी मेसिनको आवश्यकता रहेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले बताए । यसअघि १२५ शैयाको अन्तरंग सेवा रहेकोमा थप २ सय शैयाको अन्तरंग सेवा थप भएको छ ।
अस्पतालमा बनेको नयाँ भवनको उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले शुक्रबार उद्घाटन गरे । साथै, मन्त्री यादवले अस्पतालमा जडान गरिएका नयाँ उपकरणहरुको शुभारम्भ गरेका छन् ।
अब क्यान्सर अस्पतालमा पोस्ट अपसहित ३२५ शैयाको अन्तरंग सेवा, ३४ शैयाको डे केयर सेवा, १५ शैयाको हस्पिस सेवा, १० शैयाको अब्जर्भेसन र १० शैयाको ब्लड ट्रान्सफुयजन सेवा गरी ३ सय ९४ शøया रहेको छ ।
अस्पतालमा रेडिएसन अंकोलोजी सेवा समयसापेक्ष स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशक आचार्यले अस्पताल स्थापना हुँदाको समयका मेसिनहरु बिग्रिएकाले नयाँ र आधुनिक मेसिनहरुको आवश्यकताबारे उपप्रधान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नयाँ भवनमा नयाँ सेवा
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले २ सय शैयाको नयाँ अन्तरंग भवनमा नयाँ सेवाहरु दिने तयारी रहेको बताए । ८ वटा अत्याधुनिक मोडुलर शल्यक्रिया कक्ष, पोस्ट अप सेवा, आईसीयू, हेमाटोलोजी, इमर्जेन्सी, मेडिकल, सर्जिकल, भीभीआईपी र साधारण क्याविनका सुविधा दिइने भएको छ ।
अस्पतालले नेपालका ६० प्रतिशतसम्म क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्दै आइरहेको जनाएको छ । अस्पतालले मासिक २ करोडबराबरको सुविधा बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत वर्ष १ लाख ३१ हजारले यस अस्पतालबाट सेवा लिएका थिए ।
५४ वटा जिल्लामा क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने काम भएको र ५ हजार ४ सय स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम उपलब्ध गराइएको अस्पतालले जनाएको छ । ३७ जिल्लाका २ हजार शिक्षकहरुलाई क्यान्सर रोकथाम र सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणबारेमा तालिम दिइएको छ ।